विश्व चर्चित रोनाल्डोको जिवनको यस्तो आश्चर्य लाग्दो रहस्य: कोकको वोतल किन हटाए ? आमाले दिइन् यस्तो वयान - Juneli Daily
विश्व चर्चित रोनाल्डोको जिवनको यस्तो आश्चर्य लाग्दो रहस्य: कोकको वोतल किन हटाए ? आमाले दिइन् यस्तो वयान
JD — July 8, 2021 add comment
केही दिन अघि हंगेरीको बुडापेस्टमा पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डोले कोकाकोलाका दुईवटा बोतल हटाएर पानी पिए । त्यतीबेला उनका लागि सामान्य लागेको यो घटनाले कोकाकोला कम्पनीका लागि भने निकै महंगो सावित भयो ।
संयोग यस्तो बन्यो की यो घटना पछि कोकाकोलाको शेयर मूल्य ४ अर्ब डलरले घट्यो । यो घटना पछि खेलाडीको जिवनशैलीलाई लिएर धेरै चर्चा भए । रोनाल्डोले आफ्ना अगाडी रहेका दुईवटा कोकाकोलाको वोटल साइड लगाउँदै पानीको वोतल उठाएका थिए । त्यसको विश्वभर चर्चा भयो ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वका एक उत्कृष्ट फुटबलर हुन्। उनी विश्वकपको उपाधिका लागि संघर्षरत छन् । तर उनले अन्य सबै किसिमका उपाधि र उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन्। उनी पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन् । उनको फिट शरीरको पनि निकै चर्चा हुन्छ । यसको पछाडी उनको जिवनशैली प्रमुख कारण छ ।
अधिकाँश फुटबलरले शरीरमा ट्याटु खोपेका छन्। तर रोनाल्डोको जिउमा ट्याटु छैन। उनी अन्य खेलाडी भन्दा निकै भिन्न छन् । उनी खानपानमा निकै सजग छन्। उनी कोकाकोला, फेन्टाजस्ता कुनै पनि पेय लिँदैनन् । उनी झन् म दि रा र चु रो टबाट सानैबाट टाढा छन् । खेल सकेर अन्य साथी यि सबै कुराहरु लिएर रमाइलो गरेका बेला उनी भने सँधै टाढा रहन्छन् । त्यसका पछाडी निकै ठूलो कारण छ ।
धेरै म दि रा पिउने र चु रो ट सेवन गर्ने बानीका कारण रोनाल्डोका पिताको सन् २००५ मा निधन भएको थियो। त्यसबेला रोनाल्डो उदयीमान खेलाडी थिए। ५२ वर्षमा पिता होसे डिनिस अभिरोको निधन भएको केही वर्षमै उनी विश्वका चर्चित खेलाडीमा पर्न थालेका थिए ।
रोनाल्डोकी आमा डोलोरेस अभिरोका अनुसार रोनाल्डोलाई यस्ता कुराहरुले कति हानी गर्छ भन्ने राम्रोसंग ज्ञान भएका कारण उनी कहिल्यै पनि छुँदैनन् । आफ्ना वुवाको जिवन नै समाप्त पारेका यस्ता चिजहरुवाट उनी संधै टाढा रहन चाहन्छन् । मानिसको जिवनका लागि यस्ता वस्तु सत्रु हुन् भन्ने कुरा छोरालाई थाहा छ, आमाले भनेकी छन् । द सन
देशको ढुकुटी रित्तियो , वृद्धभत्ता पनि रोकिने !
ए मेरो हजुर-४ बाट दुर्गेशको दृश्य नहटाउने , दर्शकलाई नै च्यालेन्ज दिने !
‘पीर’ गीतबारे प्रकाश सपुतले दिए स्प्रष्टीकरण , यूटुबबाट हट्यो ?
भिम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा देशभक्त नयाँ पार्टी गठन !